Maitiro ekugadzira zviyeuchidzo paWhatsApp uchishandisa Chero.Do pane Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekugadzira zviyeuchidzo paWhatsApp uchishandisa Chero.Ita pane Android
2 Kuverenga Min
Maitiro ekugadzira zviyeuchidzo paWhatsApp uchishandisa Chero.Ita pane Android, mubatanidzwa wakasainwa pakati WhatsApp uye Chero.do yakagadzirira kurerutsa hupenyu hweavo vanotambura nehurombo ndangariro uye vanokanganwa zviri nyore zvinhu zvekuita. Kune vasina kudzidza, Chero.do mune ino sevhisi iyo pamusoro pemakore yakazvisimbisa seimwe yeakanakisa mu manejimendi ezviyeuchidzo uye zviitiko.
Kutanga nhasi, makambani maviri aya anoshanda kuti akwanise vashandisi ve premium ve Any.do kutaurirana nebhoti iyo yavanogona kupa mirairo senge Ndiyeuchidze kuti ndiende kunotenga uye zvakanyanya kazhinji zviitiko zvese zvaungade kuti zvirangarirwe panguva kwayo.
Chero.Ita kuti ugone kugadzira zviyeuchidzo paWhatsApp
Hapana kana chakasiyana neicho vashandisi vasina kujaira kuita kuburikidza ne Chero.do app, asi nemusiyano wekuti WhatsApp unowanzo shandiswa kakawanda pazuva uye nekudaro nenzira iyi zvinonyanya kukurumidza kuratidza chiyeuchidzo.
Iwe unogona zvakare tumira mberi whatsApp kuna Any.do bot izvo zvinozozvibata sekunge zvakanyorwa nesus. Mushure mekugamuchira iwo murairo, iyo bot inobvunza kana iwe uchida gamuchira chiyeuchidzo zveichi chiitiko uye kana iwe uchida kuchigamuchira, uye wozochitumira panguva yakakodzera muchimiro che whatsapp ziviso.
Kuti uise izvi, Vashandisi vese vepamberi vanogona kushanyira whatsapp.any.do kana kushanyira marongero eapp.do.
Maitiro ekumisikidza Chero.Ita basa muWhatsApp
Kuti ushandise sevhisi nyowani, unofanirwa kuve ne Chero.do premium account uye shandisa iro basa kubva pane ako maficha. Nekuzviita, nenzira iyi, paunopinda WhatsApp musangano kana runyorwa rwezvinhu zvekuita, unogona kuzvitumira zvakananga kune chero.do.
Nenzira iyi, iko kunyorera ichaisa chiyeuchidzo otomatiki uye nekuzvimiririra. Iri basa rakanga risati riripo muWhatsApp uye nekuda kwekubatana kutsva, vashandisi vechishandiso vachakwanisa kuishandisa nekutenda kuna Any.do, kurerutsa nzira
Maitiro ekugadzira zviyeuchidzo neWhatsApp
Chekutanga pane zvese, pane chikonzero chekuita gadza Chero.do uye gadzira premium kunyorera kutanga nhanho-nhanho-tsananguro yeiyo nyowani WhatsApp chimiro, iwe unofanirwa kugadzira fungidziro.
Iyo bot zvakare inoziva inotumirwa mameseji, zvinoreva kuti kana iwe ukatambira senge "Tenga usati waenda kumba", iwe unofanirwa vagovana iwo chaiwo meseji neAki.Do chat kuitira kuti urege kuikanganwa. Mushure mekugamuchira iwo meseji, iyo bot inozopindura otomatiki nekubvunza kuti riini uye kana kugashira chiyeuchidzo cheichi chiitiko chaicho. Mhinduro yacho inogona kunge iri mumutauro wechisikigo, zvichiita kuti zvive nyore kutaura uye kushandisa chinhu ichi chinobatsira.
Mabasa akagadzirwa kuburikidza neWhatsApp anozoenderana otomatiki neiyo Any.do app uye yayo inosanganisirwa account. Iyo ficha yave kuwanikwa pane Android. Kuti uzo zviite, tanga Chero.do uye enda kuZvirongwa> Kubatanidzwa> WhatsApp.
Mashandisiro ekushandisa iyo Android Smartphone mune akangwara uye ecological nzira
Snapseed: Yakanakisa pikicha mhariri yeApple